नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): माओवादी सत्ता कब्जाकै प्रयासमा, नालायक भए नेताहरु, आउने भएन संबिधान, देश भरी सुरक्षा ब्यबस्था कडा, सेना हाइ एलर्टमा !
माओवादी सत्ता कब्जाकै प्रयासमा, नालायक भए नेताहरु, आउने भएन संबिधान, देश भरी सुरक्षा ब्यबस्था कडा, सेना हाइ एलर्टमा !
संविधान जारी गर्ने अन्तिम दिन सम्म पनि दलहरुबीचको विवाद समाधान नभएपछि बढेको अन्यौलतासँगै देशभरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । विभिन्न संगसंगठनले आ आफ्ना माग राखि आन्दोलन र प्रदर्शनलाई जारी राखेका कारण हुन सक्ने विषम स्थितिलाई ध्यानमा राखि सुरक्षा व्यवस्था
कडा पारिएको छ । जातीय राज्यको पक्ष र विपक्षमा आवेगात्मक प्रदर्शन भईरहेका कारण स्थिति नियन्त्रण बाहिर गए परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । राजधानीमा सात घेरामा सुरक्षा कर्मी परिचालित भई सुरक्षा दिईरहेको सुरक्षा निकायले जनाएका छन् । सबैभन्दा बढी प्रदर्शन हुने स्थान संविधान सभा भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा सवैभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाईएको छ ।
राजधानी भित्रने र बाहिरिने नाकाहरुमा पनि बाक्लो संख्यामा प्रहरीलाई परिचालन गरिएको छ । त्यसैगरी स्थिति नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रण बाहिर गए सुरक्षा प्रदान गर्न सेनालाई पनि हाईअलट राखिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । धर्ना र जुलुसका कारण हुनसक्ने अपि्रय घटनाको मध्यनजर गदै राजधानीमा सम्पूर्ण विद्यालय आज बन्द गरिएको छ ।
संविधान जारी गर्न आईतबार रातीसम्म पनि दलहरुबीच सहमति नभए प्राप्त उपलब्धिहरु के हुने हो भन्ने अनिश्चिततासँगै संविधान सभा निर्वाचन र तलबभक्तामा खर्चिएको ९ अर्व रुपैयाँ खेर जाने छ ।
देशमा पहिलो पटक भएको संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा प्रत्यक्ष रुपमा करिव साढे ५ अर्व रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसयता सभासद्को तलब भक्ता र अन्य गरी ३ अर्व सकिएको छ । सरकारी तथ्यांकमा नदेखिने गरि दातृ निकायले गैरसरकारी संस्थामार्फत दिएको खर्चको लेखाजोखा नै छैन् ।
‘संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसपछिको खर्च सरकारबाट मात्र ९ अर्ब रुपैयाँ भएको छ ।’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ‘अन्य माध्यमबाट त कति भयो भयो लेखा जोखानै छैन ।’
शान्तिकोष मार्फत विभिन्न आठ शिर्षकमा भएको खर्चको विवरण भने कोषको वेभसाईडमा राखिएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । संविधान सभाबाट सभासद् चुनिएर काठमाण्डौं आएका ६ सय १ सभासद्हरुको तलबमात्र साढे ३ अर्ब भन्दा बढी रहेको छ ।
संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख दलहरूबीच आइतबार मध्यरात सम्ममा सहमति नजुटे संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पाउने जनताको चाहनामाथि तुषारापात हुनेछ । दलहरूका आ–आफ्नै अडानका कारण संविधानसभाको भविष्य नै संकटमा परेको छ ।
मधेसी मोर्चासहित प्रमुख चार दलबीच प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा राति भएको छलफलमा पनि दलहरूले आ–आफ्नै अडान दोहोर्‍याए । दिउँसो भएको छलफलपछि उपप्रधानमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले त मुलुक भयावह संकटको बाटोतर्फ लागेको घोषणा नै गरे । ‘उस्तै परे अब संविधानसभाको बैठकसमेत बस्न नसक्ने अवस्था आएको’ उनले पत्रकारलाई सुनाए ।
माओवादी र मोर्चाले राज्य पुन:संरचना आयोगले तयार गरेको १० प्रदेश र संविधानसभाको समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशको अडान प्रस्तुत गर्दै सहमति नभए मतदानमा लगेर टुंगो लगाउन बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । तर, कांग्रेस र एमालेले अन्तिम समयमा मतदानमा जान नसकिने भन्दै अस्वीकार गरे । दिउँसो दलहरूको बैठकस्थलमै पुगेका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि मतदानमा जान अब सम्भव नभएको शीर्ष नेताहरूलाई सुनाएको खबर आजको सौय दैनिकले छापेको छ ।
बैठकमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले चार महिनाका लागि संविधानसभालाई रूपान्तरित संसद्मा परिणत गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए । चार महिनामा पूर्ण संविधान जारी नभए नयाँ चुनावमा जाने उनको प्रस्ताव थियो । ‘रामचन्द्रजीलाई आज कहाँबाट गुरुमन्त्र प्राप्त भयो ? चार महिनामा रूपान्तरित संसद्ले संविधान जारी गरौँ भएन भने विघटन गरेर चुनावमा जाऊँ भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो,’ गणतान्त्रिकका नेता यादवले भने ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले माओवादी संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नदिने र संविधानसभा पनि विघटन भए सत्ताकब्जा गर्ने उपयुक्त वातावरणको खोजीमा रहेको आरोप लगाए । ‘हामी सरकारमा छौ , हामीलाई कसले हटाउन सक्छ ? संसद् नरहेपछि सत्ताकब्जा गर्ने उपयुक्त समय हो भन्ने मानसिकतामा माओवादी छ,’ उनले भने । संविधान नबने त्यसको दोष माओवादी र उसको सहयोगी मोर्चाले लिनुपर्ने उनले बताए ।